I-Black Chapel enamawele eebhafu zehlathi elinemvula - I-Airbnb
I-Black Chapel enamawele eebhafu zehlathi elinemvula
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguJackson
Ihlaziywe, i-Up-cycled, kodwa inobunewunewu, le ndlwana imnandi, i-2 brm cabin, inoxolo kwaye izolile. Ecaleni lomlambo omncinci, i-bushwalk ukuya elunxwemeni, iikhefi, kunye neentaba. Ikhabhinethi ifanele abantu aba-4 ubukhulu, akukho bantwana bangaphantsi kwesi-8.
Kukho iingoma zasehlathini ezikufutshane, kwaye i-Figure Eight pool ayikho kude. Ungahamba uye elunxwemeni ngetonela eyimfihlo phantsi komgaqo kaloliwe, okanye iingoma ezibukekayo. Ukuhlehla iyure enye ukusuka
eSydney. Indlu eyi-4 brm Main ihlala kumnyango olandelayo, kodwa kukho indawo yabucala eyaneleyo.
Lo mmelwane umncinci uziva uphantse wasemaphandleni, kukho abamelwane onokuthi ubabone kwi-Chapel kwaye indlu enkulu isecaleni kokwabelana ngeyadi engaphambili, kodwa sibekwe kakuhle kwaye ibucala ngokupheleleyo. Uneyadi yakho yasehlathini, kwaye ujonge umfula omncinci onyakazayo (ukuba bekunemvula!) Kukho ingca eninzi yokwenza ipiknikhi.
I-Chapel ipholile, ifudunyezwa ngazo zombini ii-AirCon kunye nezifudumezi zombane, (nge-100% yamandla ahlaziyekayo kuphela). I-Chapel yayiyiprojekthi eyakhiwe phantse ngokupheleleyo ukusuka kwiziqwenga ezisindisiweyo kunye neziqwenga zaseGumtree, intle kwaye ayifezekanga, ayityibiliki kwaye intsha.
Ulwandle luyimizuzu kude.
Sisebenzisana kunye ne-homewares yethu yasekhaya i-boutique 55 Parrots, kwaye sinika iindwendwe zethu ithuba lokufumana iimpahla ezintle, zonke ezinokuthengwa.
Sihlala silungisa kwakhona, iifoto zisenokungameli ifanitshala yangoku, landela i-Instagram Theblackchapel yethu ukuze ubone inkangeleko yethu yamva nje.
Sibonakaliswe kwiNethiwekhi ye-9 etshatileyo ekuBungeni kokuQala, kwaye uninzi lweefoto zefoto yendawo yethu kunye noyilo.
Besizii-Superhosts ngaphambili kwi-COVID, kodwa njengoko sisandula ukuyivula kwakhona oku kungangabonakali.
Indawo yasemaphandleni nezolileyo, indawo yasehlathini kunye nolwandle olukufutshane ne-drive okanye uhambo olumnandi, izindlu ezimbalwa ezitsha ziyakhiwa. I-Earthwalker cafe ilungile kwaye ihambe nje yimizuzu emi-5, kwaye kukho iindawo zokutyela ezininzi, kubandakanya iSailor yaseMazantsi, iPara, iOld Siam Thai, kunye neCin Cins Italian, kunye nokuthenga okumnandi kumgama nje wemizuzu emi-5 ezantsi kwendlela eThirroul. Kukho iklabhu enkulu yolwandle ebizwa ngokuba yiHeadlands Hotel kumgama wokuhamba kunye neTheatre ka-Anita okanye iBulli Pub ihlala inomculo odlalwayo.
Kubantwana, iSymbio Animal Park yimizuzu eli-15 kuphela yokuqhuba ukuya emantla eHelensburgh.
Umbuki zindwendwe ngu- Jackson
My wife Eliza and I own a luxury travel business in Australia, we travel all the time, so know what it takes to create a great guest experience, excited to share our beautiful property with others :)
Sifumaneka ngefowuni nanini na usidinga ... ngamanye amaxesha sisondele, kodwa sihlala sifuna ukwazi ukuba kukho ingxaki!
Sinezinja ezintathu ezinobuhlobo kwipropati, zingakhonkotha xa ufika kuqala ukuze zisilumkise, kodwa zikhuselekile ngokupheleleyo. Ukuba awuzithandi izinja okanye uyazoyika uxolo lo mhlaba awukho kuwe.
Indlu enkulu isecaleni kweChapel, kodwa malunga nokuqelelana njengoko naziphi na izindlu ezi-2 ezingabamelwane zisedolophini. Senza ukuhlala kwakho uzive ubucala kakhulu. Uya kuhlala etyholweni, kukho izinambuzane zendalo kunye nezilwanyana emithini kwaye zijikeleze ikhabhinethi.
Sinezinja ezintathu ezinobuhlobo kwipropati, zingakho…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-27727
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Austinmer